သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားနေသော မူဆယ်မြို့နယ်တွင် ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် အသိပညာပေးလုပ်င - Yangon Media Group
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားနေသော မူဆယ်မြို့နယ်တွင် ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် အသိပညာပေးလုပ်င
မူဆယ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၂- သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွား နေသော ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက် ပိုင်း) မူဆယ်ခရိုင် မူဆယ်မြို့တွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါတား ဆီးကာကွယ်ရေးအရှိန်မြှင့်သည့် အနေဖြင့် အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက် နံနက် ၉ နာရီက မူဆယ်မြို့ ဟိုမွန်ရပ် ကွက်၌ ခြင်ဆေးဖျန်းခြင်း အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရ သည်။ အဆိုပါခြင်ဆေးဖျန်းခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် အသိပညာပေးလုပ် ငန်းကို မူဆယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံအုပ် ကြီး ဒေါက်တာ ဥာဏ်မြင့်နှင့်အတူ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ များ၊ မူ ဆ ယ်မြို့နယ် မိခင်နှင့် ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ မူဆယ်မြို့ နယ်အတွင်းရှိ ပရဟိတအသင်း အဖွဲ့များနှင့် ဒေသခံလူငယ်မောင် မယ်များဖြင့် တစ်အိမ်တက်ဆင်း ခြင်ဆေးဖျန်းခဲ့ကြသည်။
“မိုးပျောက်သွားပြီးနောက် ပိုင်း ရာသီဥတုပူလာတဲ့နောက်ပိုင်း တွေမှာ ခြင်ပေါက်ဖွားလာမှုများ ပြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့် သွေး လွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားမှု အနည်း ငယ်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်တဲ့ လူနာတွေထဲမှာ လူကြီးလူနာတွေ အဖြစ်များခဲ့ပြီး စွမ်စော်ရပ်ကွက် က ငါးနှစ်အောက်ကလေးတစ် ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် အခုလိုအဖြစ်များတဲ့ မူ ဆယ်မြို့ ဟိုမွန်ရပ်ကွက်၊ စွမ်စော် ရပ်ကွက်နဲ့ တောင်ရပ်ကွက်တို့ကို ဒီနေ့ကစပြီး နေ့စဉ်အလှည့်ကျ ခြင်ဆေးဖျန်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင် ရွက်နေပါတယ်”
ဟု မူဆယ်မြို့နယ် စံပြဆေးရုံ ခုတင် ၁၀၀ ဆံ့ပြည် သူ့ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာဥာဏ် မြင့်က ပြောကြားသည်။
မူဆယ်မြို့နယ်တွင် စက်တင် ဘာ ၂၇ ရက်နောက်ပိုင်း နှစ်ပတ် အတွင်း အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက် အထိ သွေးလွန်တုပ်ကွေးလူနာ ၉၀ အထိရှိခဲ့သောကြောင့် ယခု ကဲ့သို့ ကာကွယ်ရေးနှင့် အသိ ပညာပေးရေးများ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အာရှဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းအဖွဲ့စတင်တည်ထောင်သည့် မင်္ဂလာအခမ်းအနား စတင်ကျင်းပ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီး အနှ?
ဒုတိယအကြိမ် ဘာသာပေါင်းစုံ ဆုတောင်းပွဲ ရန်ကုန်မြို့ အင်းလျားကန်ပေါင်တွင် ကျင်းပ
ကျိုက်သလ္လံစေတီတော် တောင်ထိန်းနံရံနှင့် အဆောက်အအုံများ ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် ငွေကျပ်သန်း ၄ဝဝဝ
အင်းတော်မြို့နယ်တွင် ကုန်တင်ယာဉ်ပေါ်မှ ကျပ်သိန်းပေါင်း တစ်သောင်းကျော်တန်ဖိုးခန့်ရှိ မူးယ??
American Junior ဂေါက်ရိုက်ပြိုင်ပွဲ၌ ဟိန်းစည်သူဗိုလ်စွဲ၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်(၁)သို့ဝင်ခဲ့